Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo lagu wado inuu booqasho ku tago magaalada Kismaayo – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo lagu wado inuu booqasho ku tago magaalada Kismaayo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa lagu wadaa inuu booqashadiisa ugu horeysay ku tago magaalada Kismaayo ee Xarunta Jubada Hoose, kaasoo qeyb ka ah socdaalada Ra’iisul Wasaaruhu ku tagayay qeybo ka mid ah Gobolada dalka.
Sida uu warbaahinta u sheegay Gudoomiyaha Gudiga Farsamada ee shirka maamul u sameynta Jubooyinka Macalin Maxamed Ibraahiom ayaa sheegay in shirka lagu wareejinayo dowladda Soomaaliya, isla markaana Ra’iisul Wasaaraha imaanayo.
“Shirka dowladda ayaa lagu wareejinayaa, si ay garsoor uga noqoto, ayna u bixiso tasiilaadka kaga aadan, waxaana noo imaanaya Ra’iisul Wasaaraha”ayuu yiri.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaruhu uu tagi doono maalinta sabtida oo berri ku begean, hase ahaatee si dhab ah looma xaqiijin karo, inkastoo wararku tibaaxayaan in todobaadka soo socda uu tagi doono.
Shirweynaha maamul u sameynta Jubooyinka ayaa hareeyay khilaafaad, iyadoo horay Ra’iisul Wasaaruhu uga soo horjeestay, waxaana shirkaas diiday Xubnaha Gobolka Gedo ka soo jeeda oo ugu horeeyo maamulka gobolaas.
Dowladda Soomaaliya ayaa horay u dooneysay inay shirka Kismaayo ay hogaankeeda lahaato, taasoo keentay inuu khilaaf soo kala dhex galo iyaga iyo Maamulka KMG ee Kismaayo ka arrimiya.
Taliska Guutada koowaad ee Ciidamada xooga dalka oo ka warbixiyay Ammaanka Jowhar
Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Marka